Jimco, Juun 16, 2021 Jimco, Juun 16, 2021 Douglas Karr
Maaddaama dadka intooda badani wax ka bartaan oo ka helaan ganacsiyada maxalliga ah khadka tooska ah, joogitaanka khadka tooska ah ee internetka ayaa muhiim ah. Macluumaad sax ah oo ku saabsan ganacsiga, sawirro tayo wanaagsan leh, casriyeyntii ugu dambeysay, iyo jawaabaha dib u eegista ayaa ka caawiya dadka inay wax badan ka bartaan ganacsigaaga oo badiyaa go'aamiyaan haddii ay doortaan inay kaa iibsadaan adiga ama qofka kula tartamaya. Maareynta liistada, marka lagu daro maaraynta sumcadda, waxay ka caawin kartaa ganacsiyada maxalliga ah inay horumariyaan joogitaankooda internetka iyo sumcaddooda iyadoo awood u siineysa inay maareeyaan qaar ka mid ah
Maxay Kaliya 20% Akhristayaashu u gujinayaan Cinwaankaaga Maqaalka
Arbacada, Oktoobar 28, 2020 Arbacada, Oktoobar 28, 2020 Douglas Karr
Cinwaanada cinwaanada, cinwaanada boostada, cinwaannada, cinwaannada… wax kasta oo aad rabto inaad ugu yeedho, waa qodobka ugu muhiimsan qayb kasta oo ka mid ah waxyaabaha aad dhiibto. Sidee muhiim u tahay? Marka loo eego macluumaadkan 'Quicksprout infographic', halka 80% dadku ay akhriyaan cinwaan, kaliya 20% ka mid ah dhagaystayaasha ayaa dhab ahaan riixa. Calaamadaha cinwaanka ayaa muhiim u ah hagaajinta mashiinka raadinta iyo cinwaanada ayaa muhiim u ah helitaanka waxyaabahaaga la wadaago warbaahinta bulshada. Hadda oo aad ogtahay in cinwaannada ay muhiim yihiin, waxaad u maleyneysaa inaad la yaabban tahay waxa
Kahor intaadan igu xanaaqin qodobkaan, fadlan si fiican u aqri. Ma dhahayo Google ma ahan ilo wax soo saar la yaab leh ama in aysan jirin wax suuq geyn ah oo ku saabsan maalgashiga labada istiraatiijiyad raadineed ama lacag bixin. Ujeeddadayda maqaalkan ayaa ah in ganacsiga weyn uu gebi ahaanba xukumayo natiijooyinka raadinta dabiiciga iyo kuwa la bixiyo. Waxaan marwalba ognahay in lacag-bixinta-gujintu ay ahayd kanaal ay lacagtu xukuntay, waa qaabka ganacsiga. Meelaynta ayaa had iyo jeer aadi doonta